Asia Pacific Airport Passenger Traffic Set to Plunge 24% in Q1 | Myanmar Business Today
Home Business International Asia Pacific Airport Passenger Traffic Set to Plunge 24% in Q1
South Korean soldiers carry out disinfection work at the international airport amid the rise in confirmed cases of coronavirus disease (COVID-19) in Daegu, South Korea, March 6, 2020.
Airport passenger traffic in the Asia-Pacific region is expected to takea24 percent hit in the first quarter from the coronavirus, leading toa$3 billion decline in airport revenue and placing pressure on growth projects, an industry group said on March 9.
Takeoff and landing slot rules mean airlines must fill at least 80 percent of their slots in any given season, or risk losing their allocation next time round.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အာရှပစိဖိတ်ဒေသရှိ လေကြောင်း ခရီးသည်အရေအတွက်သည် ယခုနှစ်တွင် ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းမျှ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ထိုသို့ ကျဆင်းသွားပါက လေကြောင်းခရီးသွားလာမှုမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံအထိ ကျဆင်းသွားနိုင်ပြီး တိုးတက်မှုအလားအလာများအပေါ်တွင်လည်း သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်သည်ဟု Airports Council International (ACI) Asia-Pacific က ဆိုသည်။
လေ‌ယာဥ်ခရီးစဥ်များ ပယ်ဖျက်ခြင်းကြောင့် လေ‌ယာဥ်ဆင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းအပေါ် ကောက်ခံမှုမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများလည်း လျော့ကျလာစေကြောင်း၊ ထို့အပြင် ခရီးသွားအရေအတွက်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများ ကျဆင်းခြင်း၊ လက်လီငွေကြေး သုံးစွဲမှုလျော့ကျခြင်းတို့ကြောင့်လည်း လေဆိပ်အော်ပရေတာတွေ အပေါ် ထိခိုက်စေကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့က ဆိုသည်။
“လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့အတွက် လေယာဥ်ခရီးစဥ်တွေ ဖျက်သိမ်းတာ၊ လေယာဥ်တွေကို တခြားခရီးစဥ် ပြောင်းလဲ ပြေး‌ဆွဲတာတွေ လုပ်လို့ရတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ မတူတာက လေဆိပ်အော်ပရေတာတွေဟာ ရွှေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို စီမံခန့်ခွဲရတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ ပိတ်ချလိုက်လို့မရဘူး” ဟု ACI Asai-Pacific ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Stefano Baronciက ပြောသည်။
“သူတို့ဟာ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချဖို့ အခက်အခဲရှိနေသလို ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ဖို့လည်း ဘဏ္ဍာငွေနည်းနည်းသာ ရှိတဲ့အတွက် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ဖိအားတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်
Previous articleU.S. Retailers Face $700 Million Hit as Virus Disrupts Ocean Shipping
Next articleChina’s Supply Chain Woes Fan Concerns of Possible Drug Shortages